Iifowuni ezintsha ezinokuprintwa ezivela kwi-Samsung | I-Androidsis
Isamsung isebenza kwii-smartphones ezimbini ezisongelayo
Nge-20 kaFebruwari, iSamsung yazisa ngokusesikweni ukuzibophelela kwayo ekusongeleni ii-smartphones, ukubheja okuninzi kugutyungelwe yile uHuawei wayivezayo kwiintsuku kamva ngeMate X. Zombini ziyimigangatho emibini eyahluke ngokupheleleyoKubonakala ngathi ubuhle be-Mate X evela kwiHuawi butsale umdla, ubuncinci ngokubonakalayo.
Ngelixa kuyinyani ukuba imodeli yokuqala ethiwe thaca ngokusesikweni kwaye ivumela ukusongelwa yiRoyale Flexpai, iimvakalelo ezinikezelwayo zihlwempuzeke kakhulu ukuba zingafikelela kwintengiso nangaluphi na uhlobo lwempumelelo. NgokukaBloomberg, Isamsung isebenza kwiimodeli ezimbini zokugoba.
Ukusuka eBloomberg bathi Inkampani yaseKorea isebenza kwiimodeli ezimbini ezisongekayo ze-smartphone, ukugqibezela uluhlu olwaqala ngathi yonke into ibonakala ngathi iya kwenziwa kuphela yiGolden Fold.
Umbono weSamsung kukusungula imodeli yokusonga sKuyafana noyilo olunikezelwa yiHuawei Mate X kwaye enye isekwe kwingcinga ebonelelwe yiklasikhi Imoto yeRAZR, umnxeba wecamshell owaba ngowona mthengisi uphambili kwihlabathi liphela.
Le modeli ifana ne-Motorola RAZR inokufakwa kuluhlu lwe-W, apho inkampani yaseKorea yenza iimodeli ezahlukeneyo zolu hlobo zifumaneke kubathengi bayo, imodeli enescreen sangaphandle ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi yesiqhelo ngelixa ngaphakathi, sifumana ikhibhodi ebonakalayo ebomini.
Kuxhomekeka kulwamkelo olunokuba nalo iGlass Fold phakathi kwemithombo yeendaba kunye nabasebenzisi, kunokwenzeka ukuba isikrini sangaphandle semodeli yegobolondo osebenza kuyo siyakususwa, into ebaluleke kakhulu ingabonakala iyimpazamo kum, kuba inemisebenzi emikhulu.
Ukunikezelwa kwale modeli kuya kuba zicwangciselwe ukuphela kwalo nyaka okanye ekuqaleni kuka-2020. Ngokusengqiqweni, i-Samsung ifuna ukulinda ukuze ibone ukuba intengiso isabela njani kwaye ibone ukuba yeyiphi kwezi zinto zimbini zisongwayo ze-smartphone ezinokuthambeka ngakumbi kwintengiso, nangona ngexabiso eliphezulu elinazo zombini iFold kunye neMate X, le datha kuya kufuneka ithathwe kunye ingqolowa yetyuwa.
Okwangoku, sibonile ukusonga iikhonsepthi ezimbini ze-smartphone, kodwa asikayiboni ukubheja kukaXiaomi, ukubheja okunomdla ukuba ividiyo abayithumele kuTwitter iyinyani, ividiyo apho sibona indlela ismartthone esonga ngayo ngaphakathi ngokungathi yinto kathathu, enye ingcinga enokuthi ibe yeyona ichazayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung isebenza kwii-smartphones ezimbini ezisongelayo
Ungayiguqula njani i-Android yakho ibe yimitha yobuchwephesha simahla
I-Sony kunye ne-Xperia 1 yayo ngokuchasene namaza, ngaba iya kuseta imeko?